Iveki yamaRoma Ukusebenzisana Romance | Amaphepha ombala wamahhala okukhuphela
Iimpelaveki zothando ngeendawo ezizodwa
Iimpelaveki zothando zendalo
Iveki yokuthanda yedwa kufuneka ibe seveki. Ukuqalisa ngomhla weMigqibelo ngokuhlwa kwaye ukuxakeka ngeendaba zeMvulo ezizayo ngeSonto mva kuzisa uxinzelelo ngakumbi kunokuzihlaziya.
Iingcamango zeveki zothando
Kuyamangalisa ukuba unokuqala ngeveki yokutshata ngoLwesihlanu kusihlwa. Emva koko, okokuqala, kukho ubusuku bokulala, ngokukhawuleza njengoko ufuna, kwiprogram. Isidlo sasekuseni ebhedini, mhlawumbi ne-champagne okanye i-champagne, ifakiwe. Ukuqiniswa kakhulu unokuyonwabela ngokupheleleyo uMgqibelo ozayo kwaye ujabulele.
Amaqabane ngokuhlwa ebusuku
Iimpelaveki zothando kunye nempilo
Ngenxa yoko akukho nto iphazamisa uthando, kuyacetyiswa ukuba ungayichitha iveki kwiindonga ezine zasekhaya. Into ohlala uyibona yinto onokuyenza "nje". Unokufumana njani ukusuka kwiintonga ukuya kwiintonga kwaye ungafumani uxolo loqobo.
Uhambo oluya kwiveki yothando akufuneki ukuba kude. Kwisixeko sakho esikhulu okanye esilandelayo ngokuqinisekileyo ihotele enhle. Kubahlali beedolophini, amahotele asemaphandleni angenanto okanye izindwendwe ezihambelanayo nolwandle olutshintsho olukhulu ukusuka kwisixeko esiqingqiweyo.
Kwanokuba ihotele ye-luxury ingaba yanye kanye. Kule mininzi yezindlu kukho amalungiselelo akhethekileyo kwizibini. Unokukhetha kwiiphakheji ezinobomi ezinobumba, ukuhlalisa umzimba kunye nezinye izifo zonyango kuye kunye naye. Ezi zicelo ziyakonwabela kunye, mhlawumbi kwigumbi lakho okanye kwindawo yangasese yeehotele.
Xa spa akukho nje ezithandwa agudileyo iintyatyambo okanye iziqhamo ukuba ukhetha amanenekazi, kodwa okumnandi ezifana ukuhlamba kwi ogutyula beer isixovulelo ngetshokhwe okanye umxube wetyuwa-honey amadoda wayemthanda ngokwenene.
Ukuba unomsebenzi omningi ongakwenza kwiehotele, awufuni ukuhlala ehotele eqhelekileyo kwixesha lakho langasese. Kuthiwani ngeveki yokuthandana kwi-igloo? Ukufakwa kwiifuru ezifudumalayo ezifudumele, kukhululekile ngokucacileyo apho. Iigloos zihlotshiswe ngokukhawuleza kwaye zikhanyiswe ngokungqalileyo.
Enye imbono yiveki ngeeveki. Ihotele zase Hay zifumaneka kwiindawo ezininzi. Amalungiselelo alolu hlobo idla ziquka iziselo bamkelekile, Hofrundgänge, multi-course ofakwe idinala koko nobusuku kwibhedi enkulu kwi anuka imifuno hay. Isidlo sakusasa elisanda kusetyenziswa izinto zasekuhlaleni bakhonza ngexesha elifunekayo.
Iiveki eziphakanyisiweyo zenzeke kwi-Baumhaushotel. Kwiindawo eziphakamileyo, izindlu zemithi zizinzileyo kwaye zikhuselekile kwaye azinanto zintuthuzelo.
Umendo omtsha weeveki zothando zivela eUnited States. Kukho iehotele ezikhethekileyo ixesha elide kunye nezixhobo ezikhethekileyo. Amagumbi ahlotshiswe ngokweengcamango zokuzikhusela. Ama-Whirlpools egumbini, iindawo zokudlala ezinkulu kunye neentlobo zamathoyizi ziyafumaneka kula ma hotele, apho kukho ngoku naseJamani.
Ingqiqo yimiba eqinisweni, kwaye inhlalakahle yempilo iyanakekelwa kwigumbi. Iindlu ezinomoya ophazamisayo azivumeli abantwana njengeendwendwe, ngoko unako ukuhlala uphumelele.
Uvakalelwa njengenkosi okanye ukumkanikazi: yiyiphi ihotele ezininzi zaseburhulumenteni. Kwiindawo zokuhlala uchitha ii-fairytale iintsuku nobusuku kwaye uphuhliswa i-cicinary ngokuphathelele yonke imithetho yobugcisa bokupheka.
Impelasonto yokuthandana iyafaneleka ukuba ihoxise kuyo yonke impucuko. Ifulethi okanye indlu, i-log cabin elihle elwandle, elwandle okanye ezintabeni likucela ukuba.
Ukutya okwaneleyo kunye nezixhobo ezipheleleyo kunye neelinen yelinki kunye nazo zonke izinto ezongezelelweyo ezinikezelwayo. Ngaloo nto uthabatha isitshixo kwiindawo zokuhlala kwaye ude ude uhambe uxolo oluhle. Unokuchitha le ntsuku endlwini okanye ebhedeni okanye uphume kwindalo. Akukho fowuni, akukho khomputha okanye i-laptop, akukho iTV kunye noonomathotholo kwaye akukho fowuni yeselula kufuneka iphazamise ukuhlanganisana.
Udibaniso luhlala kwendalo
Ekugqibeleni ixesha lokuzonwabisa, ukupheka kunye nokuzonwabisa kunye kunye. Ubume buhamba buhlungu intloko yakho kunye nokwenza iindawo ezintsha kunye neengcinga. Uphulaphula izandi zendalo kwaye uzive uphila kakuhle.
Umculo ngokuqinisekileyo uyinto ebangela ukuba uthandane. Ngeveki yokuthandana yomculo, unokudibanisa ukutyelelwa kwekhonsathi kunye nesidlo esimnandi kunye nokuhlala ubusuku ehotele enhle.
Esi siganeko sijonge umculo obabini amaqabane angakwazi ukuwina, okanye into entsha ngokutsha ayenayo. Ingaba yiklasi okanye ibetha, ipop kunye nedwala, apho uhlala khona. Ngaphandle kwemiziki kunye nokuthanda amabali kwinqanaba lezemidlalo lifanelekile ukudibanisa imvakalelo yothando.
Ukuba isiganeko senzeka ngoLwesihlanu, ungasebenzisa uMgqibelo olandelayo ngokumangalisayo ngemisebenzi eminye. Ukuhamba kweenqwelo zeenqwelo-moya kwi-helicopter okanye kwibhaluni kulo mmandla yizinto ezingalibalekiyo kunye kunye.
Ukutyelela okongeziweyo kwibhebha lokutshiza kunye nehlabathi le-sauna kunye neziko lobuhle lizinikela kwisimo sezulu esincinane. Kwaye kwintengiso yokuthenga ingaba yothando, ukuba ukhangele i-lingerie enhle, ozama ukuhlwa ehotele.